Warar ka imaanaya dalka Chile oo sheegaya in Alexis Sanchez uu ku biiri doono kooxdan…. – Gool FM
Warar ka imaanaya dalka Chile oo sheegaya in Alexis Sanchez uu ku biiri doono kooxdan….
(Chile) 10 Abriil 2017. Alexis Sanchez ayaa xagaagan isaga soo tagi kara Arsenal marka uu qandaraaska uu ku joogo Emirates Stadium galo 12-ka bilood ee ugu dambeeya.
Chelsea ayaa u muuqatay inay hogaamineyso tartanka loogu jiro dhaliyaha reer Chile, inkastoo ay xiiseynayaan Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester United iyo kooxo ka dhisan horyaalka lacagaha la waalanayaa ee Shiinaha.
Laakiin warsidaha Cooperativa ee dalka Chile ayaa sheeganaya in weeraryahanka Arsenal uu Man City kula biiri doono macallinkiisii hore ee Pep Guardiola.
Waxaa la sheegay in Manchester City ay dooneyso inay saxiixa laacibka ka bixiso adduun dhan 50-milyan isla markaana sare u qaado mushaarkiisa ilaa 200,000 usuuciiba.
Guardiola ayaa la soo saxiixday Sanchez markii uu ka arriminayay Barcelona 2011-kii, laakiin macallinka reer Spain ayaa sanad kaddib ka fariistay ciyaaraha oo sanad fasax ah qaatay, laacibka ayaana ugu biiray Arsenal adduun dhan 30-milyan sanadkii 2014.
Waxaa aad loogu wareersan yahay halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka xiddiga reer Chile iyadoo wareysi uu horey u bixiyay ku sheegay inuu ku faraxsan yahay London isla markaana rajeynayo inuu qandaraaskiisa ku dhammeysto halkan.
Higuain oo asxaabtiisa uga digay qatarta Barcelona
Wakiilka Pepe oo kulankii ugu danbeeyay la qaadanaya maamulka Real Madrid